Sawirka Goobta Warshadda
Faafin caraf udgoon
Saliida saliida / kululeeyayaasha saliida
Qolka cabsida leh
Bixiyaha Dahabka ee Alibaba
Bogga ugu weyn » Nagu saabsan » Profile Company
Dhismaha 2, No.807, Chengliu Road, Degmada Jiading, Shanghai
Wax soo baaraWixii Pricelist
Markasta ku dadaal sida ugu fiican. waxaad beeratid hada, goor dambe ayaad goosan doontaa-Lucy
Kooxda Heerka Sare, Go Go Go Go !!! (Ballaadhin + Dalxiis)
Maanta, waxaan ka wada shaqeyneynaa baaritaanka "sida loo wada shaqeeyo" kooxdeena. Waxaan ku jabinay dhibaatooyin talaabo talaabo ah ugu dambeyntiina waxaan gaarnay guul. Kooxda aadka ufiican Adiga ayaa ugufiican! ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Naqshadeynta iyo soosaarka heer sare., Ltd Dhammaan Xuquuqda Dhowran